Barashada: internetka laftiisa wuxuu noqon karaa mid xariif ah Abaalmarinta Abaalmarinta
Bogga ugu weyn Waxbarashada Isticmaalka Internetka
Ma taqaan qof ku adagtahay in uu xoogga saaro wax kasta oo aan ahayn internetka? Ma waxay ku qaadataa waqti badan iyo in ka badan oo kaliya daawashada? Miyay noqdaan kuwo xanaaq badan marka arimaha kale ay ka baxaan?
Mid ka mid ah maandhayaha ayaa sheegay in ku dhawaad ​​80% dhalinyarada ay daweyneyso aysan lahayn xaaladaha caafimaadka maskaxda ee loo daaweeyo iyo calaamadaha iyo calaamadaha la nadiifiyo kadib baaritaan saddex toddobaad ah oo degdeg ah. Xaaladahaas waxaa ka mid ah niyad-jabka, ADHD / ADD dabeecada iyo laba-cirifoodka. Kaliya adoo isticmaalaya isticmaalka internetka dhowr asbuuc si aad u ogaatid in calaamadaha ay la xiriiraan dhaqdhaqaaqa kali ahaan kalkaaliyaha ama daryeel bixiyaha inuu hubiyo in xaaladda caafimaadka maskaxdu ay dhab tahay. Xitaa haddii ay tahay xaalad taagan, Dr. Dunckley ayaa sheegay in ay sii xumaan doonto internetka.
Isticmaalka internetka waa dhibaato. Waxay ku xirantahay kororka go'doonka bulshada iyo welwelka bulshada. Niyadjab iyo cadaawad ay ka sii daraan isticmaalka maandooriyaha internetka ee dhallinyarada.
Saddex Wareegga Hore ee Hore
Victoria Dunckley waa mid aad u fiican buugga, “Dib Udeji Maskaxda Cunugaaga - Qorshe 4 Todobaad ah oo lagu Joojinayo Dhibaatada, Kordhinta Fasalada iyo Kordhinta Xirfadaha Bulshada adoo ka rogaya Saamaynta Waqtiga shaashada elektarooniga”Waa qorshe la tijaabiyey oo waaliddiintu adeegsadaan si ay uga caawiyaan ilmahooda inay bartaan caadooyinka internetka ee balwadda leh. In kasta oo aysan si toos ah ula macaamilin isticmaalka mukhaadaraadka internetka, saldhigga caddayntu badanaa waa isku mid. Barnaamijku wuxuu qaadanayaa saddex toddobaad, oo lagu daray wuxuu u baahan yahay hal toddobaad oo dheeraad ah oo diyaarin ah si loo hubiyo inuu si habsami leh u socdo.
Ku-darsashada internetka waxaa ka mid ah khamaarka, ciyaaraha fiidiyoowga, warbaahinta bulshada, barnaamijyada galmada, gadashada iyo filimada.
Cudurka qaawan ee qaawan ee internetka ayaa suurtogal ah in uu waxyeelo ka badan yahay cayaaraha ama warbaahinta bulsheed maxaa yeelay waxay burburin kartaa rabitaankeena jinsiga ah ee dabiiciga ah iyo jacaylka dadka dhabta ah.
2015 cilmi Naqshadeynta Xanuunka Qodobada Pornography Addiction: Dib-u-eegid iyo Dib-u-cusbooneyn ayaa keeneysa in gabagabada internetka loo isticmaalo habka mukhaadaraadka ee loo yaqaan "pornography Internet" oo la wadaago qaababka aasaasiga ah ee la macaamilka maandooriyaha.
Astaamaha isticmaalka suuxdinta ee xad-dhaafka ah waxay inta badan ku dheehan yihiin cudurrada kale. Si aad uhesho shuruudo dhab ah oo ka soo jeeda jilicsanaanta, waxa ugu wanaagsan ee la doonayo in la bilaabo labbo dhakhso ah. Marka maskaxdu aanay sii dheereyn, waxay leedahay fursad ay dib ugu soo celiso dareenka dabiiciga ah.
Sayniska Maareynta Internetka
Fiidiyowgaan fiidiyowga wuxuu ku soo qoray “Wixii aan Bartay” wuxuu siinayaa booqasho cilmi-baaris wanaagsan oo ku saabsan farsamooyinka maskaxda ee gaarka ah ee ka dhigaya internetka (iyo walxaha iyo sidoo kale dabeecadaha) balwad. Ujeeddadoodu waa inay ka caawiyaan daawadayaasha inay fahmaan sida internetka uu u saameynayo maskaxdaada si aadan u bilaabin inaad xakameyso (17.01).
<< Wax barasho la'aan